Iintsuku ezingama-90 zibambene ne-LG G6, oku kube ngamava ethu | Iindaba zeGajethi
Kulixesha elide okoko i-LG, ngaphakathi kwesakhelo seNkomfa yeHlabathi yeHlabathi ebibanjelwe e-Barcelona, ​​ngakumbi nge-27 kaFebruwari LG G6 ngendlela enomtsalane. Esi sixhobo sitsha sitsha sitshintshe ngokupheleleyo kwinto ebesiyibonile nge-LG G5 sagxekwa ngokuqatha kuyilo lwaso olungaqhelekanga xa sijonga kuqala kwaye ngakumbi ukunyusa izinto ezidlulileyo.
Nangona kunjalo, ngokuhamba kwexesha ezi zigxeko ziye zayeka kakhulu, kwaye izincomo seziqalisile ukufika. Nabanye abavelisi abaninzi bakope kwi-LG into eyayiyilo loyilo olungaqhelekanga. Ndiyigxekile ngexesha lokunikezelwa kwesiphelo esitsha senkampani yaseMzantsi Korea, ndichithe iintsuku ezingama-90 ndisebenzisa kwaye iitafile zijikile, waneliseke kakhulu phantse kuzo zonke iindlela kwaye sinokuthi siphantse ukuba siqala ubudlelwane obukhulu bothando obunokuhlala ixesha elide.
Ngaphambi kokuba ndiqale kufuneka ndikuxelele ukuba kolu vavanyo ndibeke bucala i-iPhone 7 yam, endothusayo okanye mandimangaliswe bubungakanani bayo obundivumele ukuba ndiyiphathe ngesandla esinye ngokulula kunye namandla ayo amakhulu, ukongeza kwikhamera yayo ihambisa imifanekiso esemgangathweni esemgangathweni phantse kuyo nayiphi na imeko.
1 Uyilo olungaqhelekanga olwandenza ndaqiniseka kususela kumhla wokuqala
2 Ikhamera ekuphakameni kweyona nto ibhetele
3 Hayi, i-Snapdragon 821 ayinangxaki mihla le
4 Ixabiso le-LG G6 lihlala lihla
5 Uluvo lwam; Ndingayithenga kwakhona i-LG G6
Uyilo olungaqhelekanga olwandenza ndaqiniseka kususela kumhla wokuqala
Enye yezona zinto zintsha zintsha ze-LG G6 ngokungathandabuzekiyo yayiyilwe, yenziwa ikhathalogu ekuqaleni phantse wonke umntu engaqhelekanga. Kwaye kunjalo ngescreen esikhulu, phantse ngaphandle kwezakhelo ezihlala ngaphambili nangayo i 18: 9 ratio ishiye phantse kungabikho mntu ungakhathaliyo.
Ukusuka kumzuzu wokuqala ndithathe isiphelo sendlela ye-LG ngaphandle kwebhokisi, ndiye ndaqonda ukuba isikrini asizukuba yingxaki, ngaphandle kokuba kukho iividiyo zeYouTube kunye nezicelo ezimbalwa ezingalungiselelwanga olu lwalamano lwescreen, kodwa azinangxaki zininzi kuthi yonke imihla. Kananjalo, ukusuka kumzuzu wokuqala ophethe isixhobo ngesandla sakho, uyaqonda ukuba awunathemba ngokuwa eluthandweni.
Kude kube kudala, ndandingumkhuseli omkhulu wee-smartphones ezinezikrini ezingama-5.5-intshi ngenxa yokhetho abasinike lona, ​​umzekelo, xa kufikwa kumba wokuzonwabisa ngemultimedia, kodwa ngokuhamba kwexesha utyekelo lwam luye kwiitheminali Imilinganiselo emincinci, enje nge-iPhone 7 yam, evumela ukuba ndiyiphathe ngaphandle kokuphazamiseka epokothweni yebhulukhwe yam kwaye ndiyisebenzise ngesandla esinye, into ebaluleke kakhulu ebomini bam mva nje. I-LG G6 singathi sisiphelo esikhulu esivaliweyo esincinci.
Nangona utshintsho lunokubonakala lubuhlungu, ndiqaphele umahluko omncinci kakhulu xa kuthelekiswa nobungakanani be-iPhone 7, mhlawumbi ngenxa yomlinganiso wesayizi, owenza ukuba uphakame, kodwa ungabi mkhulu. Ukongeza, ukuchukumisa indibaniselwano yesinyithi kunye neglasi kuyenza ibe nomtsalane kakhulu kukuchukumisa, into ngokuqinisekileyo ekufuneka ithathelwe ingqalelo.
Ngokubhekisele kwikhamera, kwaye ngaphandle kokusebenzisa i-iPhone 7, andithandabuzi ukuba ikhamera ye-LG G6 ayizukushiya incasa embi emlonyeni wam, ngokuchaseneyo. Ngokuqinisekileyo oku kunceda kakhulu ekubeni une-LG G3, i-LG G4 kwaye kunjalo LG G5.
Umgangatho wekhamera ungaphezulu kokulungileyo, ukukwazi ukuyithelekisa nayo nayiphi na enye ikhamera ye-smartphone kwintengiso. Ukongeza, ezinye iinketho kunye neempawu zayo ziyenza ibe yenye yezona zinto zintle kule LG G6.
Ikhamera engasemva kabini isivumela ukuba sibe neelensi ezahlukeneyo kwimeko nganye. Kwaye kwimigama emifutshane sinokuvula i-f / 1.8 kunye ne-OIS, ngelixa umgama omde sinenye Iilensi eziyi-125º ngaphandle kokubonwa kwesigaba okanye isiqinisi sombala, ngenqanaba lengxolo ye-f / 2.4.
Mhlawumbi inye kuphela kodwa inokubeka ikhamera ye-LG G6 ngalo lonke elixesha ndiyisebenzisileyo kukuba ikhamera yesibini ayinaso isiqinisi sombane, into elahlekileyo kakhulu kwezinye iimeko, nangona ngaphandle kwayo ingaphila ngaphandle kwengxaki ezininzi. Ewe kuyinyani ukuba amaxesha endikhe ndasebenzisa ikhamera yesibini ngokuqinisekileyo angabalwa ngeminwe yezandla.
Imowudi yencwadana yekhamera kunye nezinye iindlela zokonwaba zibeka i-icing kwikhamera enika le LG G6 ukukhanya okukhulu kwaye incinci ukuba nomona ngayo nayiphi na into ekhoyo kwintengiso.
Hayi, i-Snapdragon 821 ayinangxaki mihla le
Ekupheleni konyaka we-2016, ukumiliselwa kwe-Snapdragon 821 kwenziwa igosa, iprosesa yokuba i-LG G6 inyuka kwaye siyibonile kwizixhobo ezinjenge-OnePlus 3T ebonisa ukusebenza okuhle. Nangona kunjalo, i-LG yagxekwa kabukhali ngokufaka iprosesa ephelelwe lixesha kwiflegi yayo, ngaphandle kokulinda i-Snapdragon 835 esiza kuyibona kamva kwi-Samsung Galaxy S8.
Ngethamsanqa, kwaye Nangona singenayo iprosesa yemodeli yamva nje, ukusebenza endikunikwe yi-LG G6 kungaphezulu kokukhulu, ungakhange uqaphele nayiphi na ingxaki, ungacothi nakumaxesha athile okanye xa usebenzisa umdlalo okanye usetyenziso.
Yoyisa ingxaki enokucinga ukuba i-Snapdragon 821 yiprosesa eyayingazukulinganisa, ingxaki enkulu mhlawumbi ibhetri, ephinda yenzeke kwaye ihlala isenzeka kwizixhobo zeselfowuni ze-LG akumangalisi. Kwimeko yam, ukuba ndisebenzisa i-smartphone phantse ngalo lonke ixesha, kufuneka ndiphathe itshaja, nangona ayisiyonto yahlukileyo kwinto esele yenzekile nge-iPhone 7 yam okanye phantse zonke izixhobo endinazo.
Ukuphuma ngaphandle kwamathandabuzo, ndenze uvavanyo lokuba iqabane lam lithathe i-terminal, kuba ayilisebenzisi ngokufanayo nakum, kuba nakho ukufikelela esiphelweni sosuku ngaphandle kweengxaki ezininzi, ezilunge ngokwenene uninzi lwabasebenzisi abangachithi imini yonke njengam ngefowuni yabo ethe nca ezandleni zabo.
Ixabiso le-LG G6 lihlala lihla
Ixabiso lentengiso ye- LG G6 Yayizi-euro ezingama-749, eziphantse ukuba wonke umntu wayephezulu kakhulu kwaye ngakumbi kuthathelwa ingqalelo ukwaziswa okwenziwe ngaxeshanye, kunye nezinto zamva nje zokuvelisa kwaye zazinexabiso elifanayo okanye elisezantsi.
Ngokuhamba kwexesha ixabiso liye lawa de labekwa apho bekufanele ukuba likho kwasekuqaleni. Ukuba ixabiso liyehla alwenzi ukuba i-terminal ibengcono okanye ibe mbi, kodwa ziindaba ezimnandi kubo bonke abasebenzisi abanokukhetha ukuyithenga ngexabiso eliphantsi.
Namhlanje inokuthengwa kwiAmazon nge-euro ezingama-439 okanye into efanayo, ixabiso nje elinomtsalane ngesixhobo esiphathwayo, enokuthi ijongane nayo nayiphi na iflegi yalo nyaka ngaphandle kokuphuma kakhulu. Mhlawumbi ukoyisa nasiphi na isixhobo esiphakamileyo kufuneka sibe neprosesa ehlaziyiweyo kunye nokugcinwa kwangaphakathi okukhulu kune-32 GB esisinika yona.
Iselfowuni ye-LG G6 ...
Uluvo lwam; Ndingayithenga kwakhona i-LG G6
Ngokuqinisekileyo omnye wemibuzo olindele impendulo emva kokufunda inqaku ukuza kuthi ga ngoku kukuba ndiza kuyithenga kwakhona i-LG G6 okanye ndiyicebise. Impendulo yombuzo nguewe, phantse yonke into kobu bomi, ezinye iindlela.
Kwelinye icala, sifumana isixhobo esiphathwayo esinoyilo olugqwesileyo, isikrini somgangatho omkhulu kunye nekhamera ekuphakameni kweyona intle. Kwelinye icala, sinenkqubo ekunokwenzeka ukuba yeyayo nayiphi na iflegi ka-2016, kodwa eyokuba uninzi lwabasebenzisi ayinelanga ngaphezu kwemihla ngemihla.
Amava am angaphezulu kokulungileyo, ngaphandle kokuqaphela njengoko senditshilo ukungabikho kwamandla okanye ukusilela ekusebenzeni, ke ngaphandle kwamathandabuzo ndingacebisa ukuthengwa kwe-LG G6 kuye nakubani na ondibuze, ikwaqwalasele ukuba ixabiso layo ngoku linomdla ngakumbi.
I-LG kufuneka iphucule ezinye izinto malunga nale LG G6 ukuba ifuna ukukhuphisana ubuso ngobuso ne-Apple okanye i-Samsung, kodwa ngaphandle kwamathandabuzo amaKorea aseMzantsi ahamba ngendlela elungileyo.
Ngaba amava am eentsuku ezingama-90 nge-LG G6 akuncede wakhetha ukuthengwa kweflegi ye-LG yamva nje?. Sixelele kwisithuba esibekelwe amagqabantshintshi ale posi okanye ngenye yeendlela zonxibelelwano esikuzo, kwaye usixelele, ukuba sele unayo i-LG G6, amava akho abe njani nayo. isixhobo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Iintsuku ezingama-90 zibambene ne-LG G6, la ngamava ethu